မိမိတို့ထိုးရမည့် ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ – CharTake
chartake | January 24, 2021 | KNOWLEDGE | No Comments
မိမိတို့ထိုးရမည့် ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တစ်သန်းခွဲ ( လူဦးရေ ခုနှစ် သိန်း ခွဲစာ) စတင်ရရှိပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီလ ၂၆ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ပထမအဆင့်ဦးစားပေးအုပ်စုထဲမှာ ပါဝင်သူတွေက ကာကွယ်ဆေးကို ပထမအကြိမ် ထိုးကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကို ပထမအကြိမ်ထိုးပြီး ၂၈ ရက်အကြာမှာထပ်မံထိုးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာတွေ ရှိမှာမို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာကြောင့် ကိုဗစ် -၁၉ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးသွားပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရရင်လည်း သာမန်လောက်သာခံစားရပြီး ပြင်းထန်စွာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သင်က ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတာကြောင့် သင်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရောဂါ ကူးစက်မခံရပဲ မဖျားမနာပဲ သာဘာဝ အလျောက် ကိုယ်ခံစွမ်းအား ရစေနိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးက ကပ်ရောဂါအတွက် အရေးကြီးတဲ့ လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၆၀% ဖြစ်တဲ့ လူပေါင်း ၃၃ သန်းလောက်က ကာကွယ်ဆေးကိုနှစ်ကြိမ် ထိုးပြီးသွားရင် လူထုအတွင်း Herd immunity ရရှိပြီး ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာကြောင့် ကိုဗစ်ရောဂါ ရရှိနိုင်ပါသလား ?
မိမိတို့ရရှိမယ့် ကာကွယ်ဆေးက Oxford /AstraZeneca အမျိုးအစား အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် Covishield ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုဗစ်ကာကွယ် ဆေးက ကိုဗစ်ဖြစ်စေတဲ့ သက်ရှိ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို အသုံးပြုထားတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကိုဗစ်ရောဂါ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာမှကိုယ်ထဲမှာပိုးကို ခုခံစွမ်းအားတက်လာမှာ ဖြစ်တာ ကြောင့် ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်လေး ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပြီးချင်းမှာ ကိုဗစ်ပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့မှုရှိသွားရင် ကိုဗစ်ရောဂါရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးတာက အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလား။ သူ့ကြောင့် ဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရရှိနိုင်ပါသလဲ ?
ကာကွယ်ဆေးတွေကို စနစ်တကျ စမ်းသပ်ပြီး ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ဆေးထိုးတာက လုံခြုံစိတ်ချ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမအကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးအပြီးမှာ လူ ၁၀ ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကျော်က အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာမှာ နာကျင်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရောင်ရမ်းခြင်း။အဖျားရှိခြင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း ချမ်းတုန်ခြင်း အဆစ်ကိုက်ခဲခြင်း ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း ခန္ဓာကိုယ်က ခုခံအားကို တည်ဆောက်နေလို့ ဒီဝေဒနာတွေ ခံစားရတာပါ။
ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကို ရေခဲကပ်ပေးပါ ။ အဖျားရှိရင် ရေများများသောက်ပေးပါ။ လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုသာဝတ်ဆင်ပါ။ လိုအပ်ရင် ပါရာစီတမောလိုမျိုး အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ကိုသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အများစုက ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီး ပထ မ သုံးရက်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး နှစ်ရက်အတွင်း အလွန်ဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းမှာ ပျောက်ကင်း သွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေက ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ လက္ခဏာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ကိုဗစ်ပိုးရှိသူနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိထားပြီး ကာကွယ်ဆေး ထိုးအပြီး ၃ ရက်ကျော်အကြာမှ ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်လာရင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်ကျော်ကြာလို့မှ ဝေဒနာတွေ မပျောက်ကင်းခဲ့ရင် ကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီးမှာ ဓာတ်မတည့်မှု ရှိ မရှိကိုလည်း ၁၅ မိနစ်ခန့် စောင့်ကြည့် ရပါမယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်တဲ့သူတွေရှိပါသလား ?
ဒီကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်သူတွေက အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ် တွေ တစ်ခြားကာကွယ်ဆေးတွေ၊ ထိုးဆေးတွေ၊ သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းတွေ ၊ အစားအစာတွေနဲ့ ပြင်းထန်စွာ ဓာတ်မတည့်မှု ရှိသူတွေ လောလောဆယ် ကိုဗစ်ပိုး ကူးစက်ခံထားရသူတွေ နာမကျန်းဖြစ်နေတာကြောင့် ဆေးရုံတက်ပြီး ကုသမှု ခံယူနေရသူတွေ ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးစဉ်က ဓာတ်မတည့် မှု ဖြစ်ပေါ်သူတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ သံသယဝင်နေသူတွေက ဒီ ကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါဘူး။
သွေးမတိတ်ရောဂါရှိသူတွေ ဒါမှမဟုတ် သွေးကျဲဆေး သောက်နေရသူတွေက အထူးသတိထားပြီး ဒီကာကွယ် ဆေးကိုထိုးဖို့ လိုအပ်တာမို့ မိမိမှာ ဒီအခြေအနေတွေ ရှိနေကြောင်း ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းကို ပြောပြထားပါ။
ခုခံအားစနစ်ကျဆင်းနေသူတွေ၊ သင်သောက်တဲ့ဆေးဝါးကခုခံအားစနစ်ကိုအားပျော့စေတဲ့သူ (ဥပမာ စတီးရွုက်ဆေး၊ ကင်ဆာကုသဆေး၊ ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါအစားထိုးရသူတွေ သောက်ရတဲ့ဆေး ) တွေက ဒီကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးကို တစ်ခြားကာကွယ်ဆေးတွေ ဥပမာ သားအိမ်ခေါင်းကာကွယ်ဆေး၊ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး နဲ့ အနည်းဆုံး ၂ ပတ်ခွာပြီးမှ ထိုးရပါမယ်။
ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူတွေက ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ လိုအပ်ပါသလား ?
ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံဘူးထားသူတွေက ကိုဗစ်အတွက် ကာကွယ်မှု ရရှိသွားတဲ့အတွက် လောလော ဆယ်ဆယ် ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ မလိုအပ်သေးပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားက သုံးလအကြာမှာ လျော့ကျလာနိုင်တာကြောင့် ရောဂါဖြစ်အပြီးရက် ၉၀အကြာမှာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ပထမအကြိမ် ထိုးအပြီးမှာ သင့်တင့်သလောက် ကာကွယ်မှု ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ထိုးအပြီး ၄-၆ ပတ်အတွင်းမှာဒုတိယ အကြိမ်ထိုးပါမှ ရေရှည်ကာကွယ်မှုကို ရရှိမှာပါ ။ ပထမအကြိမ်ထိုးစဉ်က ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားရလို့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မထိုးတော့ဘူးလို့တော့ မစဉ်းစား လိုက်ပါနဲ့။ နှစ်ကြိမ်ထိုးထားမှ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအမျိုးအစား တစ်မျိုးထဲကို နှစ်ကြိမ် ထိုးရမှာပါ။
အခုဆိုရင် ပထမအကြိမ် အိန္ဒိယနိုင်ငံကလက်ဆောင်ရထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေး တစ်သန်းခွဲ ( လူဦးရေ ခုနှစ်သိန်းခွဲစာ) က ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒုတိယအကြိမ် တစ်သန်းထပ်မံ ပေးဦးမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ သူတို့ဆီကကာကွယ်ဆေးပေါင်း သန်း ၃၀ ဝယ်ဖို့ ဂတိကဝတ် ပြုထားတာကလည်း ဖေဖေါ်ဝါရီလထဲမှာဘစတင်ရရှိတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ WHO ကပေးမယ့် လူ ၁၁ သန်းစာ ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်း ဧပြီလ ရ ရက် မတိုင်ခင် စတင် ရောက်လာတော့မှာပါ။
ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ဖို့ သိန်းပေါင်း ဆယ်၊ရာ၊ ထောင်၊သောင်း ပေါင်းများစွာကို စေတနာရှင် ပြည်သူတွေက လှူဒါန်းထားကြတာမို့ မကြာခင်ကာလမှ ကိုယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ ၆၀% ကျော် ကာကွယ်ဆေးတွေ ရရှိတော့မှာ ဖြစ်တာမို့ လုပ်ငန်းအားလုံးလည်ပတ်နိုင်တော့မှာပါ။ မိမိကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ကြိုက် ဆေး ကုသခွင့်လည်း ရရှိတော့မှာပါ။ စာသင်ကျောင်းတွေလည်း ပြန်ဖွင့်နိုင်တော့မှာပါ။ တစ်နယ်စီရောက်နေကြလို့ မိသားစုနဲ့ ဆုံတွေ့လိုသူတွေ နဲ့ ခရီးထွက်ချင်နေသူတွေအတွက်လည်း ဆန္ဒ ပြည့်ဝနိုင်တော့မှာပါ။ ကိုဗစ်ကင်းစင်တဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ လက်တစ်ကမ်း အကွာမှာ ရှိနေပါပြီး။
ဒါပေမဲ့ ဒီကြားကာလမှာ မိမိက ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားပြီးတောင်မှ လူထုကြားမှာ Herd immunity မရသေးသ၍ ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် အိမ်ပြင်ထွက်ရင် Mask တပ်ရပါဦး မယ်။ လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာ မသွားပါနဲ့ဦး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၆ ပေခွာ နေရပါဦးမယ်။ မကြာခဏ လက်ဆေးရပါဦးမယ်။ ခဏလောက်တော့ ဆက်လက် သီးခံလိုက်ကြပါဦး။ အားလုံးကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး ကိုဗစ်ကင်းစင်ကာ စီးပွားတက်ကျပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Crd ; ဒေါက်တာခင်မိုးမိုး။